ISafa ithi uMashaba usengumqeqeshi | News24
ISafa ithi uMashaba usengumqeqeshi
KUYIQINISO ukuthi imiphumela engagculisi nokwehluleka kweBafana Bafana ukuya kwi African Cup of Nation eGabon ngo 2017 nokwehluleka ukudla iMauritania ekhaya ibe ishoda kuyicikile impela iSafa.
Kanti kuthiwa emahhovisi eSafa aseNasrec eFNB Stadium, obasi nosomaqhuzu bashayisana ngamakhanda futhi bayaveva ukudinwa ngendlela izinto ezihamba ngayo eqenjini elikhulu lesizwe, kodwa iqiniso lithi asikho isinqumo esisathathiwe ngekusasa lakhe.
Noma iningi labezindaba sebemgwebile uEphraim “Shakes”Mashaba baze bathi akusensuku zingaki ibhantshi lakhe ligcwale umoya, kodwa iSafa ithi asikho isinqumo esesithathiwe ngaye.Isikhulu esingomunye wobasi kwiSafa uDennis Mumble oyi Chief Executive Officer (CEO) uthi akulona iqiniso ukuthi uMongameli weSafa uDanny Jordaan uthe akusekude ukuthi uMashaba akhonjwe eza ngayo.
“Sonke siyavuma ukuthi akekho onamele imiphumela esisanda kuyibona kwiBafana Bafana. Cishe wonke uMzansi uphatheke kabi ngendlela izinto ezihamba ngayo, kodwa akekho othe uMashaba usexoshiwe.
“Kufanele izwe likhumbule ukuthi umqeqeshi unenkontileka neSafa futhi-ke konke kufanelwe kulandelwe ngomthetho,”kusho uMumble.
UMumble uthe akulungile ukuthi abantu noma abacosheli bezindaba bathi uJordaan usikaze ukuxosha uMashaba.
NgoLwesihlanu olwedlule eMbombela Stadium ezikaMashaba zahluleka zaze zancama ukudla izivakashi noma sezishoda.
Emva kwaloyomdlalo nangaphambi kweMandela Challenge uMashaba uthe uyacela ukuthi angalokhu etshelwa ngokuvela emaphephandabeni ngoba akawafundi. “Ngiyacela keningixege ngokushowo abamaphepha ngami, futhi-ke mina angisawafundi amaphephandaba,”kusho uMashaba.